tufaax iphone 12 mini vs iphone 11
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista Apple iPhone 12 mini vs iPhone 11
Sida haddii 2020 ay heli karto shisheeye kasta, Tilmaamaha Apple & apos; 5G iPhones u qaabee si aad uga duwan taleefoon kasta oo ay bilawdo oo ay samaysay ilaa hadda. Labadaba kan ugu yar iyo kan ugu weyn ee iPhone-ka ee 'all-screen' nooc nashqad-y ayaa la filayaa, laakiin waxaa jiri doona moodallo kale oo dheeri ah oo la socon doona.
Carruurtaas dhexe, mid kaliya ayaa noqon doona mid asal ah, in kastoo, iyo inuu yahay farac toos ah oo ka tirsan kii hore ee iPhone 11, halka kan kalena uu soo bandhigi doono qaab cusub, sidoo kale. Wadar ahaan, 2020 wuxuu keenayaa isku shaandheyntii ugu ballaarneyd ee tirada shaashadda iPhone taariikhda.
SIDOO KALE AKHRISO
Dib u eegida iPhone 12 Pro
Dib u eegida iPhone 12
iPhone 12 dib u eegis yar
Dib u eegida iPhone 12 Pro Max
Kiisaska ugu fiican ee iPhone 12 / Pro
Qiimaha ugu fiican ee iPhone 12 / Pro iyo heshiisyada T-Mobile, Verizon, AT&T, ama quful
Apple waxay soo bandhigtay nooc cusub 5.4 'iPhone 12 mini foomka, oo ay ku xigto iPhone 11 oo ah midka kaliya ee shaashaddiisa shaashadda sii ahaato, ka dibna muuqaalka iPhone 12 Pro wuxuu korayaa ilaa 6.1 inji, iyo iPhone 12 Pro Max wuxuu marayaa illaa 6.7 inji si uu u dhammeeyo taxanaha bang.
Baahnayn in la sheego, iPhone 12 iyo 12 mini waxay noqon doonaan kuwa iibin doona saamiga libaaxa & apos; ee dhammaan noocyada iPhone 12 sanadka soo socda ama sidaas, haddaba aan barbar dhigno kuwa ka horreeyay ee dhabta ah, iPhone 11. Apple iPhone 12 mini $ 52999 $ 69999 Ka iibso BestBuy $ 69999 Ka iibso Verizon $ 0 $ 699 Ka iibso AT&T $ 0 $ 699 Ku soo iibso Bartilmaameedka
Apple iPhone 12 / mini vs iPhone 11 qiimaha bilowga
$ 799 / $ 699 vs $ 699
Halka Apple iPhone 12 Pro Max uu ka socdo $ 1099, iPhone 12 Pro-na uu leeyahay istiikarka $ 999, iPhone 12 mini & apos; s $ 699- $ 849, iyo $ 799- $ 949 qiimaha 6.1 'iPhone 12 wuxuu noqon karaa muusig taageeraha dhagaha saldhigga, maadaama ay hadda helayaan 5G iyo casriyayn casriyeysan oo la mid ah heerka aasaasiga ah ee iPhone 11 amarkiisu yahay. Dhamaan keydadkaas sanaadiiq caato ah maqnaanshaha leben amraya ama sameecado sameecadeed nooc kasta ha noqotee waa in lagu dabaqo meel, ka dib.
- ka soo iibso Apple.com. $ 30 off haddii aad iibsato nooca xamuulka-qufulka.
$ 829Ka iibso Apple
- Laga soo bilaabo BestBuy. AT&T, Verizon, iyo Sprint / T-Mobile moodooyinka.
$ 79999 Ka iibso BestBuy
- Beddel oo noo soo hel iPhone 12. Iyada oo xulashada ganacsiga iyo qorshooyinka aan xadidnayn.
$ 79999 Ka iibso Verizon
$ 79999 Ka iibso AT&T
iPhone 12 / mini vs iPhone 11 midabada
Blue vs Yellow iyo Purple
In kasta oo moodooyinka iPhone 12 Pro ay soo bandhigayaan midab cusub oo buluug ah oo loo yaqaan 'Navy Blue' oo ka baxsan dibaddooda, oo qorax u dhigaya Midnight Green ee kuwii iyaga ka horreeyay, moodooyinka ugu jaban ee iPhone 12 ayaa inta badan sii joogaya koorsada, u keydso midabada huruudda ama guduudka ah ee lagu beddelayo midab buluug ah oo wanaagsan.
Taasi waa mid la fahmi karo, iyadoo la ogyahay in iPhone 11 horeyba ugu yimid midabyo kala duwan oo hodan ku ah dhadhan iyo arag kasta, sidaa darteed Apple uma baahna inay soo saarto ama ku darto intaas oo dhan. Si kastaba ha noqotee, Apple wuxuu mar hore ku rinjiyeeyay midabada cagaaran, guduudka iyo jaallaha ah ee iPhone 11, wayna adkaan doontaa in sare loo qaado taas.
Halkii qorraxdu ka dhici lahayd midabka cagaaran, Apple wuxuu ku daray mid buluug ah si uu ula jaanqaado helitaanka moodooyinka Pro, laakiin ma ahan cod hore oo jinsi ah wuxuu muujinayaa nooca boodhka ee sheegaya inuu yahay wiil & apos; Sida iPhone 11, iPhone 12 iyo 12 mini ayaa lagu bartilmaameedsadaa dadka yar yar, iyo midabada dhalaalaya ayaa halkaas ku dhufan doona.
IPhone 12 wuxuu xambaarsanyahay midab iftiimaya oo iftiimaya marka loo eego iPhone 11
iPhone 12 vs iPhone 11 bandhig
6.1 inji OLED vs 6.1 inji LCD
2532 x 1170 pixels vs 1792 x 828 pixels
457 PPI vs 324 PPI
1200 nits vs 625 nits
2020 waa sanadka ugu horeeya ee Apple ay sii deyn doonto afar geesle iPhone 12 ah halkaas oo dhamaan taleefannada gacanta ay ku isticmaali doonaan teknolojiyadda soo bandhigidda ee OLED. Waxay ku qaadatay shirkadda 9 sano inay u wareegto OLED ka dib markii OG Galaxy S ay soo bandhigtay Samsung iyada oo leh shaashad gaar ah oo aan weli caddayn 480x800 Super AMOLED, laakiin waxay gaadhay halkaa hadda oo tiknoolajiyaddu ka jaban tahay oo meel walba taal.
Intaas oo kaliya maahan laakiin iPhone 12-ka ayaa hadda ugu dambeyn soo bandhigay muuqaal 1080p ah, oo ah wax weyn oo laga soo qaaday 720p LCD-ga IPhone 11, iyo in badan oo la mid ah qiimaha taleefanka & apos; s $ 799. Hadda dhammaan taleefannada cusub ee shirkadda & apos; waxay la socdaan muuqaal sare oo OLED ah, iPhone 12 miyuu ku dhacaa wax cillado ah marka la barbar dhigo iPhone 11? Markaad eegto astaamahayaga soo socda ee hoos ku xusan, qofku si fudud ayuu u ogaan karaa in shaashadda gadaal ee loo yaqaan 'iPhone 11' ay waxoogaa ka iftiimayaan isla markaana midabkoodu yar yahay oo aan sax ahayn. Shaashadda 'OLED', si kastaba ha noqotee, waxay leedahay dheelitirnaan cad oo lagu kalsoonaan karo, iftiinka ugu yar ee hooseeya iyo isbarbardhiga sare.
Muuji cabbirada iyo tayada
Iftiin ugu badnaan Ka sareeya ayaa ka fiican
Iftiinka ugu yar(habeenno) Hoose ayaa ka fiican
Isbarbar dhig Ka sareeya ayaa ka fiican
Delta E rgbcmy Hoose ayaa ka fiican
Delta E grayscale Hoose ayaa ka fiican
(Heer sare) 1.8
(Heer sare) aan la cabiri karin
(Heer sare) 6729
(Heer sare) 2.18
(Heer sare) 2.08
(Heer sare) 1: 1590
(Heer sare) 6922
(Heer sare) 2.24
(Heer sare) 4.84
(Heer sare) 6739
(Heer sare) 2.17
(Heer sare) 1.9
(Heer sare) 6727
(Heer sare) 2.19
(Heer sare) 6897
(Heer sare) 5.6
Jaantuska 'CIE 1931 xy gamut gamut' wuxuu u taagan yahay aagga (aagagga) midabada ah ee soo-bandhigi soo saari karo, iyadoo leh sRGB colorspace (saddexagalka la muujiyey) oo tixraac ahaan u adeegaya Jaantusku wuxuu kaloo bixiyaa matalaad muuqaal ah oo muujinta midabka muuqaalka & apos; Fagaarayaasha yar-yar ee ku teedsan xuduudaha saddex-xagalka ayaa ah qodobbada tixraaca ee loogu talagalay midabada kala duwan, halka dhibcaha yar-yar ay yihiin cabbirada dhabta ah. Fikrad ahaan, dhibic kastaa waa in lagu dhejiyaa dusheeda laba jibbaarane. Qiimaha 'x: CIE31' iyo 'y: CIE31' ee jadwalka ka hooseeya jaantuska ayaa tilmaamaya meesha cabbir kasta uu ku yaal jaantuska. 'Y' wuxuu muujinayaa iftiinka (nits) midab kasta oo la cabiray, halka 'Target Y' uu yahay heerka iftiinka la doonayo ee midabkaas. Ugu dambeyntiina, 'ΔE 2000' waa qiimaha Delta E ee midabka cabbiray. Qiimaha Delta E ee ka hooseeya 2 ayaa ku habboon.
Cabbiraadahan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo Sawirku wuxuu soo bandhigayaa 'CalMAN qalabaynta qalabka'.
Jaantuska saxda ah ee midabku wuxuu fikrad ka bixinayaa sida ugu dhow ee midabbada la soo cabiro & apos; u u yihiin qiyamkooda tixraaca Sadarka koowaad wuxuu hayaa midabada la qiyaasay (dhabta ah), halka khadka labaadna uu hayo midabada tixraaca (bartilmaameedka). Ku soo dhowaanshaha midabada dhabta ah ee kuwa bartilmaameedka ah, ayaa ka sii fiican.
Jaantuska saxda ah ee Grayscale wuxuu muujinayaa in muuqaalka uu leeyahay dheelitirnaan cad oo dheellitiran (dheelitirka u dhexeeya casaan, cagaar iyo buluug) heerarka kala duwan ee cawl (laga bilaabo madow illaa dhalaal) Ku dhowaanshaha midabada dhabta ah ee kuwa bartilmaameedka ah, ayaa ka sii fiican.
Nasiib darrose, meel kasta oo ay joogaan weli macnaheedu maahan in ciyaarta kaliya ee magaalada ka jirta ay is beddeshay marka ay timaado shaashadda OLED, waxayna kuxirantahay hal alaab-qeybiye macnaheedu waa qalooca qiimaha, sidaas darteed Apple waxay raadineysaa waddooyin ka baxsan wada-noolaanshaha ay la leedahay Samsung, oo ay ku jiraan ka shaqeynta waxyaabaha sida tiknoolajiyada microLED. Sannadkii hore, Apple waxay isku dayday inay ka fogaato Samsung adoo baaraya LG iyo BOE laakiin wax soo saarkoodu kuma filna wax uun laakiin dufcado yar yar ama qaybo dayactir ah, sidaas darteed Samsung mar kale waxay heshay saamiga libaax & apos; ee amarada bixinta iPhone OLED.
Hadda, si kastaba ha noqotee, Apple waxay kalsooni ku qabtaa in LG ay ugu dambayntii hawshaas la socoto, warbaahinta Kuuriyana waxay tabinaysay inay ka dalbatay 20 milyan oo 6.1 'iPhone 12 ah. Si kastaba ha noqotee, 12-ka ayaa si toos ah u dhaxli doona iPhone 11 kaas oo isna noqday taleefanka ugu caansan ee laga iibsado Mareykanka tan iyo markii la bilaabay.
IPhone 12-ka ugu weyn ee la cusbooneysiiyay ee ka muuqda iPhone 11 waa muuqaalka '1080p OLED'
iPhone 12 mini vs iPhone 11 bandhig
5.4 'OLED vs 6.1' LCD
2340 x 1080 pixels vs 828 x 1792 pixels
477 PPI vs 324 PPI
Sida ay iPhone 12 mini Nidaamka magac bixintu wuxuu soo jeedinayaa, in & apos; ay yihiin xubinta ugu yar Apple & apos; s 2020 iPhone dalagga, maadaama ay soo bandhigayso nooc cusub oo 5.4 'ah oo foomka ka dhigaya kan ugu yar iPhone leh darajo.
Waxay xitaa ka yartahay iPhone SE oo leh shaashad 4.7 'ah, waxaana loogu talagalay kuwa u hanqal taagaya maalmaha iPhones is haysta oo awood badan. IPhone 12 wuxuu umuuqdaa mid si qumman u agdhawaa iPhone 11 laakiin shaashadda shaashadda ma ahan farqiga kaliya ee udhaxeeya iPhone 12 mini iyo iPhone 11, maxaa yeelay sidoo kale waxaa jira hoos udhac.
5.94 x 2.98 x 0.33 inji
5.18 x 2.53 x 0.29 inji
5.78 x 2.81 x 0.29 inji
6.33 x 3.07 x 0.29 inji
Isbarbar dhig kuwan iyo taleefannada kale adoo adeegsanaya aaladdayada Isbarbardhigga Cabbirka.
In yar ka dib, falanqeeyaha caanka ah ee Apple Ming-Chi Kuo wuxuu saadaaliyay in iswaafajinta 5.4-inch iPhone 12 mini uu yeelan doono 'aagga waxyar oo cufan cidhiidhi ah si loogu soo bandhigo macluumaadka si fiican bidixda kore iyo geesaha midigta sare. ' Halkaas ayaad ku haysataa, dhammaan wararka xanta ah ee ku saabsan qaddarin yar ayaa si weyn loo buunbuuniyey, marka laga reebo iPhone 12. Waayo? Apple wuxuu ubaahanyahay inuu cusbooneysiiyo iOS 14 xaqiiqda cusub ee 5.4 ', sidoo kale.
Iyada oo cabirka shaashadda cusub uu yimid mas'uuliyadaha xallinta muuqaalka cusub, iyo iOS 14 waxay keeneysaa Apple & apos; s Display Zoom oo loogu talagalay shaashadaha iyo qaraarada ka yar IPhone 11 Pro & apos; s 5.8 'panel. Baahnayn in la dhaho, waxaa jira & apos; kaliya hal taleefan-y-y-ku-habboon ayaa ku habboon qaabkaas, maxaa yeelay Apple waxay ujeedadeedu tahay inay kor u qaaddo iOS 14 xalka cusub ee 1080p ee 5.4 'handset. Taasi & apos; waa ta kale ee xusid mudan iPhone 12 mini vs iPhone 11 farqiga muujinta.
Apple iPhone 12 cabirka miisaanka yar
iPhone 12 / mini vs iPhone 11 faahfaahin
In kasta oo IPhone 12 iyo 12 mini chipsets wali lafilayo in ay wada yimaadaan iyagoo wata isla 4GB RAM RAM oo ah iPhone 11, processor-yada gudaha kujiraa way duwanaan duwanyihiin. Apple waxay ku dhawaaqday 5nm A14 oo ay weheliso iPad Air 4 bishii Sebtember 15, waxayna muujisay inay ka awood badan tahay awoodna siinta iyo waxqabadka wanaagsan marka loo eego waalli 7nm A13 Bionic ee ku jirta iPhone 11.
Marka loo eego qorshayaasha been abuurka ah, tikniyoolajiyada 'TSMC & apos; 5nm' waxay qiyaastii tahay 15% dhakhso laakiin waxay isticmaaleysaa 30% awood buuxda oo ka hooseysa xadka 7nm ee hadda ku jira Snapdragon 865+ ama Apple A13, oo ah qolqadaha moobiilka ee hadda jira.
GFXBench Car Chase shaashadda
GFXBench Manhattan 3.1 shaashadda
Geekbench 5 hal-xudun
AnTuTu waa noocyo kala duwan, oo heer sare ah oo tilmaam moobiil lagu qiimeeyo dhinacyada kala duwan ee qalabka, oo ay ku jiraan CPU, GPU, RAM, I / O, iyo waxqabadka UX. Dhibco sarreysa macnaheedu waa qalab guud oo dhakhso leh.
magac Ka sareeya ayaa ka fiican
Haddii qaybta T-Rex HD ee GFXBench ay dalbanayso, markaa imtixaanka Manhattan waa mid cakiran. Waa tijaabo udub dhexaad u ah GPU oo isu ekaysiinaysa jawi ciyaar aad u xeel dheer oo qaabeysan oo loola jeedo in lagu riixo GPU-ga heerka ugu sarreeya. taas oo u ekaysiinaysa jawi ciyaar garaaf-xoog leh shaashadda. Natiijooyinka la gaadhay waxaa lagu cabiraa looxkiiba hal sekan, iyadoo looxyo badani ka fiicnaanayaan.
Apple iPhone 11 127,878
Apple iPhone 12 Pro 161,077
Apple iPhone 11 Pro 126,998
Maxay Apple ugu baahan tahay awood intaas ka badan, iyadoo la ogyahay in A13 uu horeyba u ahaa Chipset-ka ugu dhaqsiyaha badan halkaas? Hagaag, waxay u oggolaan kartaa inay ugu dambayntii bilawdo fulinta AR / VR iyo riyooyin kale oo sawir leh. Ka dib oo dhan, ka Kaamirada LiDAR oo ka socota iPad Pro 2020 waxaa la filayaa inay hoos ugu dhacdo kamaradda iPhone 12 Pro sidoo kale, laakiin maxaa Apple ku samayn lahaa, weli waa la arki doonaa.
Sidaa darteed, 5.4 'iPhone 12 munchkin mini waa iPhone-ka ugu awoodda badan yar ee Apple waligiis abuuray, isagoo taaj ka qaadanaya iPhone SE. Si loo wada dhammeeyo, Chipset-ka wuxuu la socdaa 5G modem lagu xayiray taas oo taageeri doonta shabakadda Verizon & apos; s mmWave, iyo kooxaha hoose-dhexe ee kuwa jecel ee ay T-Mobile hadda heysato ka dib ku biiritaanka Sprint.
BOGO$ 79999 Ka iibso Verizon
iPhone 12 / mini vs kamaradaha 11 iPhone
Dareemo ka weyn / pixels oo loogu talagalay tallaalada iftiinka hooseeya oo fiican
F / 1.6 ka weyn F / 1.8 furitaanka muraayadaha balaaran
5.4 'iyo 6.1' iPhone 12 moodooyinka ayaa laba kamaradood ciyaaraya, halka noocyada Pro-du ay leeyihiin saddex, sida Apple ay u sameyso wixii ay ku sameysay taxanaha iPhone 11 - waxay dayaceysaa kamaradda telephoto-ka waxayna ku dareyysaa LiDAR nooca Pro ee qaaliga ah. Waxaan leenahay dareemayaal 12MP iyo pixels ka weyn, in kastoo, aan awood u leenahay inaan nuugno nal badan, iyo hagaajinta xasilinta muuqaalka ee iPhone 12 marka loo eego iPhone 11.
Sida loo qaato sawirrada iskaa wax u qabso ee Habeenkii ah iPhone 12 / Pro
Sida loogu cabiro dhererka qofka & apos; iPhone 11 Pro
Sida loo duubo fiidiyowga Dolby Vision HDR ee iPhone 12 / Pro
Sida loo toogto qaabka habeenkii Sawirka leh iPhone 12 Pro / Max
Ilaa hadda, si kastaba ha noqotee, Apple waxay isticmaaleysay lenses ka kooban shan lakab, ama waxa loogu yeero 5P, xitaa moodooyinka ay sameyso ee loo yaqaan 'iPhone Pro', halka sanadkaan xitaa iPhone-ka hooseeya ee 12 iyo 12 mini ay ku raran doonaan muraayadaha indhaha ee toddobada lakab ah (7P) .
Taasi waa aakhir hore oo la siiyay halka ay kaamirooyinka taleefanka ee Android hadda ku sugan yihiin, laakiin wali waa fikrad xiiso leh in Apple ay casriyaynayso oo kaliya muuqaalka dibedda, bandhigyada iyo jibbaarada noocyada cusub ee iPhone 12, laakiin kamaradaha ayaa sidoo kale dejinaya , oo loogu talagalay xirmo dhammaystiran, oo hadda lagu rusheeyey 5G dusha sare.
Fiiri shaybaarada kamaradaha iPhone 11 iyo iPhone 12, kala duwanaanshuhu waa khiyaano laakiin waxa loo roon yahay iPhone 12:
Faahfaahin fiiqan oo ka sii duwan
Smart HDR 3 wuxuu ka dhigayaa mid dhalaalaya wali aan laheyn sawiro iftiimiya oo aan la soo bandhigin, gaar ahaan habeenkii
Midabbo diiran, ka sii dhereg badan
iPhone 11 vs iPhone 12 ballaaran, sawir, sawir-qaadis iyo sawirro kamaradaha zoom
iPhone 12 / mini vs iPhone 11 nolosha batteriga
2815mAh / 2227mAh vs 3110mAh awood
17/15 vs 17 saacadood oo muuqaal fiidiyoow ah
11/10 vs 10 saacadood oo fiidiyoow ah
65/50 vs 65 saacadood oo maqal ah oo maqal ah
Bedelaadda Chipset-ka dhaqaajinta badan iyo tikniyoolajiyadda soo bandhigga OLED ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay in Apple ay la tagtay awood batteri oo hoos u dhigaysa noocyo ka mid ah moodooyinka iPhone 12 iyo Max. Waxay adeegsaneysaa nashqadeyn batteri oo aad u jilicsan hadda si ay u dheelitirto kharashka ka kooban 5G qaybood ee ku jira iPhones-ka cusub, iyo midka ugu yar ee 5.4 'iPhone 12 mini waxaa laga yaabaa inuu ku soo dego awood batteri oo caadi ah oo ka hooseeya 2500mAh oo ay tahay inuu ka gudbo calaamadda cabbirka ka hor & apos; s cadeeyay in ku filan.
Marka la eego in iPhone 11 uu haystay rikoodh dulqaad leh oo ka mid ah taleefannada gacanta ee Apple & apos; ee la awoodi karo, iPhone 12 waa inay raacdaa isbeddelkaas haddii Apple uusan rabin inay niyad jabiso saldhigeeda adeegsade, waana ku faraxsanahay inaan soo wargelinno inay taasi runti tahay kiiska, sida aad ku aragto buundooyinkayaga baaritaanka bateriga ee hoose. Waxaan ogaanay, sikastaba, in 5G isku xirnaanta ayaa hadhay , ama kal-fadhiyada ciyaaraha , si kastaba ha noqotee, nolosha batterigaaga ayaa si weyn hoos ugu dhici doonta.
Imtixaanka daalacashada 60Hz
Ciyaaraha 3D 60Hz
magac saacadood Ka sareeya ayaa ka fiican
Apple iPhone 12 12h 33 daqiiqo
Apple iPhone 12 Pro 12h 35 daqiiqo
Apple iPhone 11 11h 26 daqiiqo
Apple iPhone 11 Pro 8h 41 daqiiqo
Samsung Galaxy S20 12h 12 daqiiqo
Samsung Galaxy S20 FE 12h 28 daqiiqo
Google Pixel 5 12h 40 daqiiqo
Apple iPhone SE (2020) 9h 5 daqiiqo
Apple iPhone 12 6h 38 daqiiqo
Apple iPhone 12 Pro 6h 48 daqiiqo
Apple iPhone 11 7h 13 daqiiqo
Apple iPhone 11 Pro 6h 27 daqiiqo
Samsung Galaxy S20 10h 20 daqiiqo
Samsung Galaxy S20 FE 9h 9 daqiiqo
Google Pixel 5 8h 49 daqiiqo
Apple iPhone SE (2020) 4h 45 daqiiqo
Apple iPhone 12 6h 46 daqiiqo
Apple iPhone 12 Pro 6h 46 daqiiqo
Apple iPhone 11 7h 37 daqiiqo
Apple iPhone 11 Pro 6h 38 daqiiqo
Samsung Galaxy S20 7h 43 daqiiqo
Samsung Galaxy S20 FE 8h 29 daqiiqo
Google Pixel 5 6h 51 daqiiqo
Apple iPhone SE (2020) 4h 59 daqiiqo
magac daqiiqado Hoose ayaa ka fiican
Apple iPhone 12 9h 1 daqiiqo
Apple iPhone 12 Pro 9h 6 daqiiqo
Apple iPhone 11 8h 59 daqiiqo
Apple iPhone 11 Pro 7h 22 daqiiqo
Samsung Galaxy S20 10h 33 daqiiqo
Samsung Galaxy S20 FE 10h 20 daqiiqo
Google Pixel 5 9h 57 daqiiqo
Apple iPhone SE (2020) 6h 31 daqiiqo
Marka laga hadlayo xaddiga lacag-bixinta, moodooyinka iPhone 12-ka laguma daabulayo leben sanduuqa dhexdiisa, maaddaama ay Apple ku sharraxayso inaad mar walba isticmaali karto mid ka mid ah adapters-kaagii hore oo jiifa, halka ay isku mar tahay furitaanka xeedho cusub oo 20W ah inaad & apos; waa inaad, si kastaba ha noqotee, si gooni ah u iibsato. Xeedho la sheegay, si kastaba ha noqotee, waqti yar kama qaadanayo inuu kaa saaro iPhone 12-kaaga marka la barbar dhigo lebenkii sanadkii hore ee 18W & apos haddii aad leedahay mid ka mid ah kuwa hareeraha ka jira.
Apple iPhone 12 5W vs 12W vs 18W vs 20W vs 65W adabtarada xawaaraha adabtarada
Iskusoo wada duuboo, aad uga fiican oo ka adag in la jebiyo bandhigga, wax yar oo kaamirooyinka ka fiican, iyo isku xirnaanta 5G oo, si kastaba ha noqotee, culeys ku ah nolosha batteriga haddii kale aad u fiican, miyaad kor u qaadi lahayd?
Isbarbar dhigyo badan oo iPhone 12 ah
Apple iPhone 12 iyo Pixel 5
iphone 12 pro max talooyin
galaxy s8 taariikhda sii deynta
sida loogu kabo soo kabashada twrp
Taxanaha Apple Watch 7 wuxuu isticmaali karaa xeelad cusub oo nadiif ah si kor loogu qaado nolosha batteriga
T-Mobile iyo AT & T oo u rogaya Android 11 cusbooneysiinta taxanaha Samsung Galaxy S10
Motorola wuxuu ku dhawaaqay Moto X Pure Edition Marshmallow cusbooneysiinta Verizon, Sprint, iyo US Cellular
Sheeg taleefan bilaash ah iyo gunno 4G LTE xogta laga helo MetroPCS
Apple iPhone X iyo Samsung Galaxy Note 8
Apple Music & apos; s Audio Audio ayaa sharraxay: Sidee ayuu u dhawaaqaa, ma wax wanaagsan baa?
Talooyin ku saabsan sida loo isticmaalo Khariidadaha Google View Street on Android
Talooyin iyo tabaha wax ku oolka ah ee IOS 13 ee wax ku oolka u ah iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
PSA: taleefankaagu ma aha mid biyuhu diidi karaan oo a & apos; ha noqon doonin biyo u adkaysta weligood